Kana Iwe Hauzive Chii chinonzi WordPress Mwana theme iri ... | Martech Zone
Kana Iwe Usingazive Chii chinonzi WordPress Mwana theme iri…
China, Gumiguru 29, 2020 China, Gumiguru 29, 2020 Douglas Karr
Uri kugadzirisa WordPress madingindira zvisirizvo.
Takashanda nevakawanda vatengi uye takavaka mazana emasaiti eWordPress pamusoro pemakore. Haisi iyo basa redu kugadzira WordPress saiti, asi isu tinomuka tichizviitira vatengi vazhinji. Vatengi havauye kuzoshandisa WordPress saiti kazhinji. Ivo vanowanzouya kwatiri kuzobatsira kukwidziridza yavo saiti yekutsvaga, yemagariro, uye shanduko.
Kazhinji kazhinji kwete, isu tinowana mukana weiyo saiti yekukwirisa matemplate kana kuvaka matsva ekumhara peji matemplate, uye isu tinowana chimwe chinhu chinotyisa. Isu tinowanzo tsvaga yakagadzirirwa-inotsigirwa, inotsigirwa-zvakanaka dingindira iro rakatengwa sehwaro hwesaiti uye zvobva zvanyatso shandurwa nedare remutengi rapfuura.
Kugadzirisa theme yemusoro tsika inotyisa uye inoda kumira. WordPress yakagadzirwa Zvinyorwa zvevana kuitira kuti vamiririri vagone kuchinjisa dingindira vasina kubata kodhi yekodhi. Zvinoenderana neWordPress:
Dingindira remwana idingindira rinotora nhaka mashandiro uye dhizaini yeimwe theme, inonzi theme yemubereki. Madingindira evana ndiyo nzira yakakurudzirwa yekugadzirisa dingindira riripo.
Sezvo madingindira achiwedzera kuwedzera kubatikana, dingindira rinowanzo kutengeswa uye rinowanzo gadziridzwa kuti utarise mabugs kana maburi ekuchengetedza. Vamwe vagadziri vemusoro vanotoenderera mberi nekuvandudza maficha mune yavo tema nekufamba kwenguva kana kutsigira iyo theme kuburikidza neiyo WordPress vhezheni vhezheni. Isu tinotenga ruzhinji rwemusoro wedu kubva Themeforest. Iwe unozoona iwo epamusoro madingindira paTemethusiti anotengeswa makumi ezviuru enguva uye ane akazara dhizaini ejensi anoenderera kuvatsigira.
Patinoshanda nemutengi, tinovaita kuti vaongorore madingindira kuti vaone maficha uye mashandiro avanofarira. Isu tinoona kuti dingindira rinoteerera pane nharembozha uye rine mukana wakakura wekugadzirisa marongero uye mapfupi ekugadzirisa. Isu tinobva tapa rezenisi nekutora dingindira. Mazhinji ematimu aya anouya akafanorongedzwa aine Child Theme. Kuisa zvese zviri Child Theme uye Musoro Wevabereki, uyezve nekumisikidza iyo Child Theme inokutendera kuti ushande mukati meMwana theme.
Kugadzirisa Chinyorwa cheMwana
Vana Themes vanowanzo gadzirirwa nemusoro wevabereki uye vanodanwa zita remusoro wenyaya neMwana pairi. Kana dingindira rangu riri Avada, Iyo Yemwana theme inowanzozivikanwa inonzi Avada Mwana uye iri mune iyo avada-mwana forodha. Haisiyo yakanakisa kutumidza musangano, saka tinotumidza zita rekuti theme mune iyo style.css faira, tumidza zita zvakare folda mushure memutengi, uyezve woisa skrini yeiyo yekupedzisira, yakagadzirirwa saiti. Isu tinogadzirawo dhizaini dhizaini kuti mutengi agone kuziva kuti ndiani akaivaka mune ramangwana.
kana Child Theme haina kubatanidzwa, unogona kugadzira imwe. Muenzaniso weiyi ndeyeMusoro weVana watakagadzirira yedu agency. Takatumidza dingindira Highbridge 2018 mushure medu saiti uye gore zvayakaitwa uye yakaisa iyo Yemwana theme mune dhairekitori imwe-sere. Iyo CSS masitayiti yakagadziridzwa neruzivo rwedu:
/ * Zita Rezita: Highbridge 2018 Tsananguro: Mwana theme ye Highbridge zvichibva pane iyo Avada theme Munyori: Highbridge
Munyori URI: https://highbridgeconsultants.com Template: Avada Version: 1.0.0 Text Domain: Avada */
Vomuyaimbova Child Theme, iwe uchaona iyo theme yemubereki kutsamira kuchionekwa se Template.
Kunze kwekumwe kugadziriswa kweCSS, iyo yekutanga template faira yataida kugadzirisa yaive tsoka. Kuti tiite izvi, isu takateedzera iyo footer.php faira kubva kumubereki theme uye tobva takaikopa mu imwe-sere forodha. Isu takazogadziridza iyo footer.php faira nemaitiro edu uye saiti yacho yakafungidzira iwo.
Mashandiro Anoita Matipi Emwana
Kana paine faira mu Child Theme uye iyo Yevabereki Musoro, iyo Yemwana theme faira ichave rinoshandiswa. Icho chinosarudzika mabasa.php, uko kodhi mumatatu ese ari maviri anoshandiswa. Themes dzeVana mhinduro yakajeka kwazvo kudambudziko rakaoma kwazvo. Kugadzirisa yakakosha theme mafaera ndeye kwete-kwete uye haifanire kugamuchirwa nevatengi.
Kana iwe uri kutsvaga agency yekuvakira iyo saiti yeWordPress iwe, raira kuti ivo vashandise iyo YeMwana theme. Kana ivo vasingazive zvauri kutaura nezvazvo, tsvaga agency nyowani.
Themes dzeVana Dzakakosha
Iwe wahaya agency yekukuvakira saiti, uye ivo vaita yakatsigirwa-inotsigirwa Mubereki Musoro uye yakanyatsogadziriswa Mwana theme. Mushure mekunge saiti yaburitswa uye iwe wapedza chibvumirano, WordPress inoburitsa yekukurumidza emergency iyo inogadzirisa gomba rekuchengetedza. Iwe unovandudza WordPress uye yako saiti ikozvino yatyoka kana isina chinhu.
Dai agency yako yakanga yagadzirisa iyo Musoro Wevabereki, unenge warasika. Kunyangwe iwe ukawana yakagadziridzwa Parent theme, iwe ungazoda kurodha pasi uye kugadzirisa chero shanduko yekodhi kuyedza kuona kuti ndeupi kururamisa unogadzirisa nyaya. Asi sezvo wako agency akaita basa rakakura uye akavandudza a Child Theme, iwe unotora izvo zvakavandudzwa Musoro Wevabereki uye isai pane yako yekugamuchira account. Zorodza peji uye zvese zvinongoshanda.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu Themeforest affiliate link mune ino chinyorwa.
Tags: avadatheme yemwanadingindira remuberekithemeforestwordpress mwana themeWordpress mubereki themewordpress themes
Toluna Kutanga: Chaiyo-Nguva Yevatengi Njere Neiyo Global Nharaunda
Iyo Mhedzisiro yeTekinoroji: Martech Ari Kuita Iyo Chaiyo Kupesana Nechinangwa Chayo Chinotarisirwa